नेपाली सेलिब्रिटीलाई बडिगार्डः सेलिब्रिटीलाई नै लाज !
काठमाडौं, भदौ २८ । नेपाली कलाकारहरुले अचेल अनौठो शैली सिकेका छन् । त्यो के भने, फिल्म रिलिज वा प्रिमियर सो को क्रममा बडीगार्ड सहित प्रस्तु हुने ।
पछिल्लो महिनामात्रै नयाँ सेलिब्रिटी कलाकारहरुलाई यसैगरी प्रस्तुत गरियो । अनमोल केसी, सलिनमान बानिया, प्रदीप खड्का, साम्राज्ञी साह लगायत कलाकारलाई निर्देशकहरुले बडीगार्डसहित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरे ।
हास्यास्पद त के भने, प्रदीप खड्का प्रिमियर सोमा प्रस्तुत हुँदा उनको साथमा केही अफ्रिकी बडीगार्ड नै खटिएका थिए । तर कलाकार प्रदीप भने बडीगार्डको बीचमा हिँडिरहँदा लजाउँदै थिए । सायद यसरी हिँडेको उनको पहिलो अनुभव पनि होला ।
अनमोल केसीले एक महिनाअघि यसै गरी बडीगार्ड साथै लिएर एक कार्यक्रममा प्रस्तुत भएपछि यो शैली लोकप्रिय बनेको हो ।
निकै सस्तो पारिश्रमिक लिएर अभिनय गर्दैआएका कलाकारहरुलाई अचानक बगीडार्ग नै भिराइदिन थालेपछि भने यस क्षेत्रमा गस्सिप पनि चल्यो । फिल्मी पत्रकारहरु र फिल्मकर्मीहरुले यस्तो चलनप्रति ठट्टा पनि गरे ।
निर्देशक मिलन चाम्सले भने बचाउ गर्दै यस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिए कि, ‘बलिउड स्टारहरुले बडीगार्ड बोकेर हिँड्न हुँदा नेपाली सेलिब्रिटीले किन नहुने ?’ तर नेपाली कलाकारहरु चाम्सले भने झैँ बडीगार्ड बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् त ?
जब कि, वर्षभरीमा एकाध फिल्म मात्रै नाफा कमाउन सफल हुन्छन् । यतिसम्म कि सबै कलाकारले त पारिश्रमिक समेत पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा केही निर्देशक भने कलाकारलाई बडीगार्ड भिराउँदै नेपाली फिल्म क्षेत्रको स्तर उकासिएको भनी मख्ख छन् ।